Zimbabwe v Bangladesh, Test - Lorgat welcomes Zimbabwe's return to Test cricket
Lorgat welcomes Zimbabwe’s return to Test cricket
The ICC Chief Executive Haroon Lorgat, who is in Harare to watch the opening day of the Test between the home side and Bangladesh, has welcomed the return of Zimbabwe to Test cricket.
“To have Zimbabwe return to playing competitive Test cricket is a progressive step and I hope we will see good performances,” said Mr Lorgat.
Following its voluntary withdrawal in 2005, Zimbabwe has not played the Test format of the game for nearly six years.
The ICC has been working with Zimbabwe Cricket to provide advice and support in order to make this return possible. Now there are encouraging signs of real recovery for the game in Zimbabwe and the ICC is keen to continue providing support wherever possible.
This entry was posted in Bangladesh, News, Test and tagged Bangladesh, cricket, Test, Zimbabwe on August 4, 2011 by Harpreet Singh.
← Lord Woolf to chair Independent Governance Review of ICC India’s No 1 Test ranking is on line: Lorgat →